Somalilandeey dhegayeelo-Sheeko layaab leh iyo Berbera | Berberatoday.com
Somalilandeey dhegayeelo-Sheeko layaab leh iyo Berbera
Anigoo ah qurbajoog Somaliland u dhashay kuna joogay fasax gaabaan wadanka mudadadii u dhaxaysay June 24-July 14, 2016, ayaan tegay magaalada Berbera July 12,2016. waxaan la kulmay dhacadan hoos ku qoran iyo sawirkan la socda.
waxaan marayay wadadada ama xaafada Daaroleh; Aniga iyo saaxiibkay Abdulrahman oo ila so socday waxaan aragnay ninka sawirka ka muuqada ee Calanka Somaliland sita waa Mohamed Iidan oo intuu calankii kala bixiyey tusaya laba nin ee ajanbiga ah ee sawirka ka muuqda oo u dhashay dalka USA.
Ogow Mohamed waa nin qaba xanuunka dhimbirka ama waalida.
buuburkii ayaan joojiyey oo aan ka soo degay iyadoo aan muqaalkii aad ii soo jiitay waxaan tegay halkii Mohamed kula hadalyey labda nin; Mohamed wuxuu ku leeyahay anaga Somaliland ayaa lana yidaa ictiraaf ayaanu doonayaynaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! waxaanu ku leeyahay af Somali.;;;;;;;;;;;;;;
Sawirka aad aragtaan ayaan qaaday ka dibna waxaan la hadlay labadii nin ee Maraykanka ahaa “Miyaa garanyaysaan wax u ninkani idin leeyahay” waxay yidhahdeen maya; waxaan ku Idhi sidaa aragtaan Mohamed waa nin waalan calankan uu sitaa waa Calanka Somaliland, waxaanu af Somali idinku leeyahay na ictiraaf ah; laba nin aad ayay ula yaabeen ka dibna sawir ayay Mohamed ka qadeen. waxaan ku idhi waxaa aragtaan rayiga ninkaa walan iyo sida qadiyada Somaliland ka tagaanyahay; hadaba maxaa u malaynsaan ku miyirka qabana.
Laba nin waxay yidhahdeen waa arin aad lola yaabo waanay na xiise gelisay waxaananu isku day doonaa inaan gaadhsiino cidi aano gadhsiin karo ee aanu is nidhaa waxa bay ka qaban karaan arintan.
Hadaba waxaan is weydiinayaa idinkana akhristaha sharfta lehna aan jecalahay inuu ila wadaago qodobadan:
* Mohamed ma isgaa waalan misa inteena miyirka leh waanu qabnaa ayaa walan.
* Mohamed insagoo waalan ayuu intaa qabtay, adigu maxaad Somaliland u qabatay.
* Mohamed hada looma dirin inoo ictraaf Somaliland u doono ee ogow waxaynu u diranyay mamul, maxay qadiyadan ka qabteen.
* Mohamed su’aalo badan ayuu ina weydinayaa; nin iyo garashadii;;;;;;;;
Somalilanderaw: Somaliand wax u qabo adoon eegin maxay adiga kuu qabatay
waan idin salamay dhamaan mareegaha gudbiyay arintan iyo intii akhriydayba.
Ahmed Ibrahim Dirir